Ahoana ny fiasan'ny angovo geothermal: fitrandrahana sy fampiasana | Fanavaozana maintso
Ahoana ny fiasan'ny angovo geothermal
Portillo Alemanina | 14/05/2021 09:30 | Nohavaozina amin'ny 14/05/2021 09:31 | Angovo geothermal
Noho ny fifaninanana avo lenta sy ny fahombiazan'ny angovo azo havaozina bebe kokoa dia foana hatrany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Betsaka ny karazana angovo azo havaozina (heveriko fa fantatsika rehetra izany), fa raha ny tena izy, amin'ny fanavaozana, dia nahita loharano angovo 'malaza' bebe kokoa isika, toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy rivotra, ary ireo angovo hafa tsy dia fantatra loatra toy ny angovo geothermal. Betsaka ny olona mbola tsy mahalala ny fomba fiasan'ny angovo geothermal.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny fiasan'ny angovo geothermal sy ny maha-zava-dehibe izany.
1 Angovo geothermal
2 Ahoana ny fiasan'ny angovo geothermal: fitrandrahana
2.1 Fantsakan-drano geothermal
2.2 Fitehirizana rano mafana
2.3 Tahiry Geyser
3 Ahoana ny fiasan'ny angovo azo avy amin'ny angovo geothermal: Fambolena herinaratra hafanana
Alohan'ny hahalalantsika ny fiasan'ny angovo geothermal dia tsy maintsy fantarintsika hoe inona izany. Ny angovo geothermal dia loharano angovo azo havaozina mifototra amin'ny fampiasana hafanana izay misy amin'ny tany ambanin'ny tany. Raha atao teny hafa, dia mampiasa ny hafanana avy amin'ny sosona anatiny amin'ny tany izy ary mamokatra angovo miaraka aminy. Ny angovo azo havaozina dia matetika mampiasa singa ivelany toy ny rano, rivotra ary tara-masoandro. Na izany aza, ny angovo geothermal ihany no loharano angovo afaka amin'ity fanao ivelany ity.
Misy gradient mari-pana any amin'ny tany halehantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hanakaiky kokoa ny mari-pana ny tany amin'ny atin'ny tany rehefa midina isika. Marina fa ny halalin'ny feo lalina izay azon'ny olombelona dia tsy mihoatra ny 12 km, fa fantatsika izany ny hafanan'ny mari-pana dia hampiakatra ny maripanan'ny tany amin'ny 2 ° C ka hatramin'ny 4 ° C isaky ny 100 metatra. Ny haavon'ireo faritra samihafa amin'ny planeta dia lehibe kokoa, satria mahia ny crust amin'izao fotoana izao. Noho izany, ny sosona anatiny indrindra amin'ny tany (toy ny akanjo mafana indrindra) dia manakaiky ny tany ary manome hafanana bebe kokoa.
Ahoana ny fiasan'ny angovo geothermal: fitrandrahana
Handahatra izay loharanom-pitrandrahana isika mba hahalalana bebe kokoa ny fiasan'ny angovo geothermal.
Ny gradien-drivotra lalina any amin'ny faritra sasany amin'ny planeta dia miharihary kokoa noho ny an'ny hafa. Izany dia mitarika amin'ny famokarana angovo mahery vaika sy famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny hafanana anaty eto an-tany. Amin'ny ankapobeny, ny fahafahan'ny famokarana angovo geothermal dia ambany kokoa noho ny an'ny angovo avy amin'ny masoandro (60 mW / m² ho an'ny angovo geothermal ary 340 mW / m² ho an'ny angovo avy amin'ny masoandro). Na izany aza, misy ny haavon'ny mari-pana voalaza ambony kokoa (antsoina hoe fitehirizan-drano), avo kokoa ny tanjaky ny famokarana herinaratra (hatramin'ny 200 mW / m²). Io fahafaha-mamokatra angovo goavambe io dia miteraka fanangonana hafanana ao anaty anaty rano, izay azo ampiasaina amin'ny indostria.
Mba hitrandrahana angovo avy amin'ireo tahirin-drano geothermal dia tsy maintsy atao aloha ny fikarohana tsena azo tanterahina, satria mitombo be ny fandaniana amin'ny fandavahana amin'ny halaliny. Izany hoe, rehefa mitrandraka lalindalina kokoa isika dia mitombo ny ezaka hisintona hafanana ho etỳ ambonin'ny tany. Anisan'ireo karazan-tahiry ara-jeolojika isika, nahita karazana telo: rano mafana, mineraly maina ary geisera.
Fitehirizana rano mafana
Misy karazan-drano fitahirizana rano mafana roa: ny loharano sy ny rano anaty. Ny teo aloha dia azo ampiasaina ho fandroana mafana amin'ny fampifangaroana kely azy ireo amin'ny rano mangatsiaka hahafahany mandro ao aminy, fa ilay teo aloha kosa manana ny olan'ny fikorianany ambany. Etsy ankilany, manana ny anaty rano anaty rano aho, izay reservoirs misy maripana ambony sy ambany lalina. Ity karazana rano ity dia azo ampiasaina hanangonana ny hafanana anatiny. Afaka mivezivezy rano mafana amin'ny alàlan'ny paompy isika hanararaotana ny hafanany.
Ny tahiry maina dia faritra iray izay maina sy mafana ny vatolampy. Amin'ity karazan-drano ity dia tsy misy tsiranoka mitondra angovo geothermal na karazana fitaovana azo zahana. Ireo manam-pahaizana no nampiditra ireo karazan-javatra ireo mba hamindrana ny hafanana. Ireo saha ireo dia ambany ny vidin'ny famokarana sy ny vidin'ny famokarana. Ny fatiantoka an'ity karazana saha ity dia ny teknolojia sy ny fitaovana ho an'ity fampiharana ity dia mbola tsy voavaha ara-toekarena, noho izany dia tokony hamboarina sy hatsaraina.
Ny geyser dia loharano mafana izay mamoaka andalana etona sy rano mafana ho azy. Vitsy eto amin'ity planeta ity. Noho ny fahatsapan'ny geyser, ny geyser dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny toerana avo lenta sy malina mba tsy hampihena ny asany. Mba hitrandrahana hafanana avy amin'ny antsanga geyser dia tsy maintsy ampiasain'ny turbine mivantana ny hafanana hahazoana fahavelomana mekanika.
Ny olana amin'ity fitrandrahana ity dia ny famerenan'ny rano indray amin'ny maripana ambany dia hampihena ny magma ary hampihena azy io. Hodinihina ihany koa fa ny fampidirana rano mangatsiaka sy ny fihenan'ny magma dia miteraka horohoron-tany kely sy matetika.
Ahoana ny fiasan'ny angovo azo avy amin'ny angovo geothermal: Fambolena herinaratra hafanana
Raha te hahalala ny fomba fiasan'ny angovo geothermal dia tsy maintsy mandeha any amin'ireo toby famokarana angovo hafanana isika. Izy ireo no toerana anaovana an'io karazana angovo io. Ny fiasan'ny toby famokarana herinaratra hafanana dia mifototra amin'ny fandidiana somary sarotra izay miasa ao rafitry ny tanimboly. Izany hoe, ny angovo dia alaina avy amin'ny atin'ny Tany ary entina mankany amin'ilay zavamaniry anaovana herinaratra.
Ny gradiantin'ny geothermal an'ny saha geothermal izay iasanao dia avo kokoa noho ny an'ny tany mahazatra. Izany hoe, ny mari-pana amin'ny halalinany dia miakatra bebe kokoa. Ity faritra misy gradient geothermal avo kokoa ity dia amin'ny ankapobeny noho ny fisian'ny aquifer voafetran'ny rano mafana, ary ny aquifer dia voatahiry ary voafehin'ny sosona tsy azo idirana izay mametra ny hafanana sy ny tsindry rehetra. Io ilay antsoina hoe reservoir geothermal, izay alaina hafanana hiteraka herinaratra.
Ireo fantsakana fitrandrahana hafanana mifandraika amin'ireo zavamaniry herinaratra dia hita any amin'ireny faritra misy rano ireny. Ny etona dia alaina amin'ny alàlan'ny tamba-jotra fantsona ary alefa any amin'ny ozinina izay ahodina ho angovo mekanika ny angovo hafanana avy eo ho lasa angovo elektrika. Raha vantany vao manana ny angovo elektrika isika dia mila mitondra azy any amin'ny toeram-piasana fotsiny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fiasan'ny angovo geothermal ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo geothermal » Ahoana ny fiasan'ny angovo geothermal
Ireo singa 5 natiora